FinaMill Smart Ekhitshini Lokusila - Imagazini yoyilo
Smart Ekhitshini Lokusila
Smart Ekhitshini Lokusila I-FinaMill sisiseko esinamandla sekhitshi esinee-spice pods eziguqukayo nezingazalisekiyo. I-FinaMill yindlela elula yokuphakamisa ukupheka kunye nencasa enesibindi yeziqholo ezisemhlabeni. Gcwalisa nje iipods ezinokuphinda zisebenze ngeziqholo ezomisiweyo okanye imifuno, cofa ipod endaweni, kwaye usile inani elichanekileyo lesinongo osifunayo ngokucofa iqhosha. Ukutshintsha ii-spice pods ngokucofa nje okumbalwa kwaye ugcine ukupheka. Yinto yokusila enye kuzo zonke iziqholo zakho.
Igama leprojekthi : FinaMill, Igama labayili : Alex Liu, Igama lomthengi : Elemex Limited.
I-bakeware, i-tafile, isiselo sotywala kunye noyilo lwe cookware
Smart Ekhitshini Lokusila Alex Liu FinaMill